LV ABC Cable Suspension Clamp ES-1500 natao mampiditra LV-ABC andalana ny Voaro iraka tsy miandany amin'ny tilikambo tsato-kazo na manda, ny lafiny hatramin'ny 30 ° nankany amin 'ny hazo lava, ary hatramin'ny 50 ° hiala amin'ny tsato-kazo.
1. mitsingevana rohy rehetra izao dia mamela ny hetsika ny clamp vatana. ES-1500 ho an'ny ABC mains ary koa ny zana-mains.
2. miray endrika, dia manampy linesmen manantona ny tsy miandany amin'ny mpitondra hafatra amin'ny toerana misokatra.
3. ES-1500 mamela ny fametrahana haingana ny Fanidiana Adjustable mafy horonantsary na dia teo aza tariby samihafa habe.
4. ES-1500 dia namatsy amin'ny aluminium fampiatoana bracket ES-1500 , izay mora mamela ny fametrahana ny LV ABC farango, pigtails, horonan sy Stainless vy andilany ny 20 × 0,7 mm.
Fiangonana fampiatoana ES-1500 tsy ampy na misaraka.
5. Toolfree fametrahana manome izany eran.
5. Fitaovana: harafesiny mahatohitra aluminium anjara, avo milina sy fitaovana thermoplastic toetr'andro fanoherana.
Analogs: Sal 1500 + LM25-95
Product fehezan-dalàna Cable habeny, mm2 MBL, kn Weight. kg
Previous: Cable ambony Suspension Fivoriambe, Sal-1500
Manaraka: Low TOSIKARATRA Voaro Cable Suspension Clamp, Sal-25-95
LV-tsipika ABC clamp
fampiatoana bracket ES-1500
Fampiatoana Clamp Sal-1500
Fampiatoana airdac clamp ES-1500.1